मानसिक रोगमा मनोवैज्ञानिक उपचार : साइकोथेरापी – Health Post Nepal
मानसिक रोगमा मनोवैज्ञानिक उपचार : साइकोथेरापी
२०७६ साउन ३१ गते ११:५५
मानसिक रोगका बिरामीलाई तनाव घटाउने उपाय सिकाउने, नकारात्मक सोचाइलाई सकारात्मक सोचाइमा परिणत गराउने, अनि मनमा रहेका उत्तेजना कम गराउने उपचारलाई साइकोथेरापी भनिन्छ । धेरै बिरामीलाई औषधिको प्रयोगका अलावा साइकोथेरापीको काउन्सिलिङ जरुरी पर्छ । धेरै मानसिक रोग तनावका कारण उत्पन्न भएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई औषधि मात्र सेवन गराएर रोग निको हुँदैन । बिरामीलाई सामान्य काउन्सिलिङदेखि साइकोथेरापीसम्मको उपचार गराउनुपर्छ । खासगरी डिप्रेसन तथा अन्य न्युरोटिक समस्यामा साइकोथेरापी गरिन्छ ।
मनलाई कसरी स्वस्थ राख्ने ?
१) एउटै कुरामा गहिरो सोचाइ नगर्ने ।
२) पुराना रुढीवादी कुरामा विश्वास नगर्ने ।
३) जे छ, त्यसमा सन्तुष्ट हुने, तर मिहिनेत गर्न नछोड्ने ।
४) हरेक कुरामा खुसी र सन्तुष्ट बन्ने ।
५) लागुपदार्थ सेवन नगर्ने ।
६) दैनिक जीवनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने ।
७) अति नीतिवान् नबन्ने र अरूबाट पनि त्यस्तो अपेक्षा नगर्ने ।
८) मन सधैँ शान्त राख्ने ।
९) मनको समस्या अरूलाई भन्ने बानी गर्ने ।
सुख र दुःख भन्ने कुरा हाम्रो हेराइ र तुलनामा फरक पर्न सक्छन् । बसमा झुन्डिएर गइरहेको यात्रु र आरामदायी सिटमा बसेर यात्रा गरेको मानिसबीच तुलना गर्दा आरामदायी सिटमा बस्ने धेरै खुसी हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुँदैन । बसमा झुन्डिएर यात्रा गरेको मानिस पनि मनमा आनन्द लिएर हिँडेको हुन सक्छ र आरामदायी सिटमा बसेको मानिसले पनि मनमा तनाव बोकिरहेको हुन सक्छ । हामी अनावश्यक कुरामा तनाव लिइरहन्छौँ र खुसी हुन सक्दैनौँ ।
एउटी छोरी पछि गएर बुहारी बन्छिन्, उनको भूमिका परिवर्तन हुन्छ, जिम्मेवारी बढ्छ, दुःख बढ्न पनि सक्छ र चिन्तित हुन्छिन् । उनको मनमा म पछि सासु पनि बन्छु भन्ने कल्पना नै हुँदैन । अनावश्यक सोचाइ लिँदै जाँदा डिप्रेसन रोग लाग्न पनि सक्छ ।
हामी एकपटक परेको तनावलाई सधैँ नै यस्तो हुन्छ भनेर सम्झन्छौँ, तर त्यस्तो हुँदैन । कसैको प्रगति हुँदा हामी संकोच राख्न सक्छौँ । दुःख पर्दा अत्तालिन्छौँ, समाजले पनि दुःख परेकालाई सहयोग गर्दैन, उल्टो हाँसोले उडाउँछ । फलस्वरूप ऊ तनावबाट उम्कन सक्दैन । हामी धेरै–धरै चाहना राख्छौँ, जुन पूरा हुन असम्भव हुन्छ, अनि छटपटीमा बस्छौँ । हामी आफूभन्दा ठूलोसँग आफूलाई तुलना गछौँ, जसले मन अझै दुःखी बनाउँछ । हामीले आफूभन्दा कमजोर मानिससँग पनि आफूलाई तुलना गर्नुपर्छ, तब मनमा खुसी पैदा हुन्छ ।
यहाँ एउटा गरिब मानिसको चर्चा गर्न वेश होला । एउटा अत्यन्तै गरिब मानिस थियो । ऊसँग पैसा हुँदैनथ्यो । उसको जुत्ता लगाउने सोच थियो, तर पैसा अभावले उसले सधैँ भगवान्लाई गाली गर्थ्यो, बिहानै उठेर भगवान्को फोटोमा थुक्थ्यो । किन मलाई गरिब परिवारमा जन्म दियौ भन्थ्यो । एकदिन ऊ एउटा मन्दिर गयो, त्यहाँ उसले हात मात्र भएको मानिस देख्यो । उसको खुट्टा नै थिएन, तैपनि खुसी हुँदै भगवान्को पूजा गरेको देख्यो । ऊ छक्क पर्यो । यो मानिस खुट्टा नहुँदा पनि कति खुसी छ, म किन दुःखी ? मसँग त कम्तीमा खुट्टा छन् । त्यस दिनदेखि उसले भगवान्लाई गाली गर्न छाड्यो र मिहिनेत गर्न थाल्यो । उसले जीवनमा सफलता पाउन थाल्यो । त्यसकारण मानिस जस्तोसुकै अवस्थामा पनि दुःखी वा खुसी हुन सक्छ । यो उसको हेराइ र तुलनामा भरपर्छ । जब मानिसले आफूभन्दा तलकासित तुलना गर्न सिक्छ, तब ऊ खुसी हुन्छ ।
हामी अन्धविश्वासमा आस्था राख्छौँ, जसले हामीमा तनाव थपिन्छ । बोक्सी लाग्छ, भूत लाग्छ, बिरालोले बाटो काटे अशुभ हुन्छ इत्यादि । हिजोआज मानिस इन्टरनेटको प्रयोग गर्छन् । दिन–रात फेसबुक र युट्युबमा व्यस्त हुन्छन्, दिमागलाई फुर्सद नै छैन । आफ्नै परिवारको मानिसको पनि वास्ता छैन । यसबाट पनि मानसिक समस्या निम्तिरहेको छ । फेरि डरलाग्दा दृश्यहरू टिभी तथा सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा मनको बिरामी पनि बढ्दो छ । त्यसैले यस्ता वस्तुको प्रयोग कम गर्नु जरुरी छ ।
भगवान्मा विश्वास गर्दा वा आस्तिक बन्दा मनमा रहेको तनाव केही भएको घट्न सहयोग मिल्छ । त्यस्तै, नराम्रो सपना देख्दा आत्तिने, मनमा चिन्ता लिने भएर मानिसहरू अस्पताल आइरहेका हुन्छन् । निद्राका वेला हाम्रो मस्तिष्क अर्धचेतन अवस्थामा हुन्छ । यसबाट सपना देखिन्छ, सपना सत्य वा असत्य हुन पनि सक्छ । त्यसैले सपना नराम्रो देख्दैमा डर मान्नुपर्दैन ।
डिप्रेसन रोगमा राम्रो कुरा नदेखिने र नराम्रो सोचाइ मात्र आइरहेको हुन्छ । काउन्सिलिङ गर्दा राम्रो कुरा पनि देखाइन्छ । डिप्रेसनका अरू बिरामीसँग पनि भेट गराइन्छ, परिवारका सदस्यबाट पनि जानकारी लिइन्छ, के कारणले तनाव भयो । पोजेटिभ सोच्न सिकाइन्छ । मन दह्रो पार्ने तरिका सिकाइन्छ । बिरामीलाई तनावमुक्त गराइन्छ । कहिलेकाहीँ श्रीमान्–श्रीमतीको झगडाका कारणले पनि डिप्रेसन रोग देखापर्छ । यस्तो अवस्थामा दुवैलाई सँगै राखेर उपचार गरिन्छ । तनाव कम हुने उपाय सिकाइन्छ ।
बिरामीले आफूसँग असम्बन्धित घटनामा पनि बढी सोचाइ लिने गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा कसरी तनावबाट अलग हुने भनेर सिकाइन्छ । बिरामीलाई रिल्याक्सेसन, व्यायम सिकाइन्छ । सुतेर लामो–लामो श्वास लिन लगाइन्छ र शरीरका अंगहरू पालैसँग रिल्याक्स गराइन्छ । यसबाहेक योग, मेडिटेसन, बायोफिडब्याकको प्रयोग गर्दा पनि मन शान्त राख्न सकिन्छ र मस्तिष्कको सोचाइ राम्रो हुने हुन्छ । यस्ता व्यायम दैनिक एक घन्टाजति गराइन्छ । काउन्सिलिङ साइकोथेरापी पनि दैनिक ३० मिनेटजति गराइन्छ । यसबाट मानसिक रोग निको हुन सहयोग पुग्छ ।
प्रा.डा. सिपी सेढाईं